Finmax ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | Finmax Group မှပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏အကောင်းအဆိုး cons - က ISO
Finmax တစ်အတော်လေးသစ်ကိုအွန်လိုင်း binary options များအကျိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 2015 အတွက်ဖြန့်ချိကမောရစ်ထုတ်ယူခြင်းလီမိတက်၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီလန်ဒန်မြို့တွင်တည်ရှိပြီးသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်နှင့်အတူဗြိတိန်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Finmax လည်းဆိုဖီယာ, ဘူလ်ဂေးရီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်အနေနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရုံးရှိပါတယ်။
Finmax တစ်ဦး legit အွန်လိုင်းပွဲစားဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးလိမ်လည်မှုပါသလဲ
အဘယ်အရာကို Finmax ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည်?
သင်တစ်ဦး Finmax ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်သငျ့သလော
ပလက်တီနမ် VIP အကောင့်
အဆိုပါ Finmax ဆုကြေးငွေအကြောင်း
Finmax နှင့်အတူထရေးဒင်း Bitcoin
Finmax အထူး features တွေ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Finmax rating
အဓိက Finmax က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပါကသူတို့တစ်တွေ legit စီးပွားရေးလုပ်ငန်းင်ဆိုတရားမျှတပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ် legit သူတို့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူးတစ်ဦးတည်းကိုကြည့်ပြီးကတည်းကသို့သော်ကျနော်တို့ကိုသူတို့အပြည့်အဝလိုင်စင်ရနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေလျှင်အထဲကရှာတွေ့မှထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလေ၏။
လောလောဆယ် Finmax (နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ဆက်ဆံရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေရေးစင်တာတို့ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်IFMRRC) ။ ဤသည်မှာအဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပွဲစားများနှင့်ဖောက်စင်တာများကိုထိန်းညှိရန်ဖြစ်ပါသည်လွတ်လပ်သောအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မောရစ်ထုတ်ယူခြင်း, Ltd လေးစားလိုက်နာနံပါတ် TSRF ru 0395 AA ကို Vv0103 ၏ IFMRRC လက်မှတ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Finmax ပလက်ဖောင်းကောင်းကောင်းဒီဇိုင်းနှင့်သွားလာရန်လွယ်ကူသည်။ အကောင့်သစ်ဖွင့်လှစ်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါတယ်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆန္ဒရှိမည်မျှပေါ် မူတည်.4ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုဒီသုံးသပ်ချက်ကိုထပ်မံဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်။
Finmax ကိုလည်းငွေပမာဏ၏အထိ 100% ၏ဆုကြေးငွေပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အနိုင်ရတဲ့အရောင်း% ထိရောက်ပြန်လာ 90 ရန်သင့်အားဖွင့်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ယူလည်း 48 နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်နှင့်သင့်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးသင်ကအခမဲ့ထုတ်ယူခံစားနိုင်။
ကုန်သည်ကြီးများပလက်ဖောင်းပေါ်ထုတ်ဝေသောအပတ်စဉ်ကုန်သွယ် webinars ကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင် platform ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအခမဲ့ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်သတင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိပါလိမ့်မယ်။
Finmax ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည်နောက်ထပ် feature ကိုသူတို့အသစ်ကကုန်သည်များအားပူဇော်3အန္တရာယ်-အခမဲ့အရောင်းအဖို့တက်သည်။
ကျနော်တို့ကသရုပ်ပြအကောင့် Finmax ပလက်ဖောင်း၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှကြောင်းသဘောတူပေမယ့်ကျနော်တို့ကနည်းနည်းကန့်သတ်ရှာတွေ့ခဲ့ပေ။ သင့်အနေဖြင့်သရုပ်ပြအကောင့်ပေါ် CFDs နှင့် FX ကုန်သွယ်မှုမရပါဘူး။ သို့သော် Finmax ကုန်သည်များတစ်ချိန်ချိန်မကြာမီသရုပ်ပြအကောင့်ပေါ်ဤအကြောင်းတူရိယာကုန်သွယ်မှုနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ကပလက်ဖောင်းနှင့်အတူတွေ့ရှိရနောက်ထပ်အားနည်းချက် tradable တူရိယာ၎င်းတို့၏ကန့်သတ်ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်သူတို့ 70 ပိုင်ဆိုင်မှုကျော်ကိုဆက်ကပ်။ ဒါကဖြစ်ကောင်း Finmax စျေးကွက်အတွက်အတော်လေးသစ်ကိုကစားသမားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်အားဖြင့်ဝင်အဖြစ်ကသူတို့ကိုအသစ်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထည့်သွင်းဖို့မြျှောလငျ့နိုငျဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျရိုးရှင်းစွာ Finmax ပလက်ဖောင်းစမ်းသပ်ဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်တစ်ဦးအခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Finmax ပလက်ဖောင်း TradeSmarter ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြု powered ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအများအပြားအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကအသုံးပြု browser ကို based software ကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ခုလွယ်ကူသည်။ based browser ကိုဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, TradeSmarter software ကိုလည်းမိုဘိုင်း device ကို အသုံးပြု. ကုန်သွယ်မှုရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါတယ်။
တိုင်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အကောင့် interface ကိုသငျသညျနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးမှ access ကိုပေးသည်
သငျသညျတိကျသောပိုင်ဆိုင်မှုလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဇယား။ ကျနော်တို့ဇယားအမှန်တကယ်တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ဖြည့်ပါဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုက်တယ်။ Finmax လည်းပိုပြီးအဆင့်မြင့်ကုန်သည်များများအတွက်ဖြည့်တင်းပေးသော TradeView ထံမှအဆင့်မြင့်ဇယားသည်။
အဆိုပါ Finmax အွန်လိုင်းပွဲစားပလက်ဖောင်းစိတျထဲမှာအပျော်တမ်းနှင့်အဆင့်မြင့်ကုန်သည်များနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အပျော်တမ်းကုန်သည်များကသူတို့ကိုအစာရှောင်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးရဖို့လဲ tutorial တစ်ခုကြွယ်ဝသောစာကြည့်တိုက်တွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆင့်မြင့်ကုန်သည်များအဘို့, နေ့စဉ်သတင်းနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အခြားသူများအကြားအပတ်စဉ် webinars ပါဝင်သည်ကြောင်းအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များဟာ host ရှိပါတယ်။ သင်ယူမှုအရင်းအမြစ်များအကြောင်းကိုတစ်ခုမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာသောင်းချီကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာလဲ tutorial တစ်ခုစုဆောင်းခြင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။
လူမှုရေးကုန်သွယ်မြန်ဆန်စွာကုန်သည်များအကြားရေပန်းစားဖြစ်လာနေသည်။ Finmax "လူမှု Radar" ဟုအမည်ပေးထားသည့်လူမှုရေးကုန်သွယ်အင်္ဂါရပ်ပေးသဖြင့်အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ပြုတော်မူပြီ။ ဒီ feature ထိပ်တန်းကုန်သည်များစွမ်းဆောင်ရည်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤနည်း, သင်သည်ထိုသူတို့ထံမှသင်ယူနဲ့အကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
သင်တစ်ဦး Finmax အကောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရွေးချယ်ထားလျှင်သင်သည်4ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုအကြားရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤတွင်ဦးချင်းစီအကောင့်အမျိုးအစားကမ်းလှမ်းသောအရာကိုတစ်ဦးအကျဉ်းဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြေးဝါအကောင့်ဖွင့်လှစ် $ 250 တစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကောင့်ကိုသင် 75 ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများ, အကောင့်တစ်ခုမန်နေဂျာနှင့်အခမဲ့ပထမဦးဆုံးဆုတ်ခွာကျော်မှ access ကိုပေးသည်။ သင့်ရဲ့ကနဦးသိုက်အထိ 25% တစ်ဆုကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ငွေအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ် $ 1000 တစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်သည်။ သင်သည်သင်၏ငွေပမာဏ၏% 50 မှတက်တဲ့ဆုကြေးငွေအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အန္တရာယ်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုအဖြစ်သင့်သိုက်၏% 25 အထိရနိုင်သည်။ ဒါကအကောင့်အမျိုးအစားကိုသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်မန်နေဂျာနှင့်ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများမှ 1 လ access ကိုမှ access ကိုပေးသည်။ ဒီအကောင့်အမျိုးအစားပေါ်ထုတ်ယူ 48 နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။
သငျသညျအထိ 5000% တစ်ဆုကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ကအနည်းဆုံး $ 75 နှင့်အတူရွှေအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
ငွေအကောင့်တစ်ခုပေါ်တွေ့ရတဲ့ features တွေထက်အခြား, ရွှေအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများနေ့စဉ် analytics, အခြေခံနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါင်းတစ်လလျှင်တစ်ဦးအခမဲ့ဆုတ်ခွာဖို့န့်အသတ်ရယူသုံးစွဲပါ။ ထုတ်ယူ 24 နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌နှင့်သင့်ငွေပမာဏ၏အထိ 50% နှင့်အတူအခမဲ့အန္တရာယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
ဤသည်အကောင့်တခုဖိတ်ကြားချက်ကိုသာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်တီနမ် VIP အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှရရှိနိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုများထဲတွင်ပါဝင်သည်:
ငွေပမာဏပေါ် 100% ဘောနပ်စမှတက်
ကုန်သွယ်မှုနှုန်း + 4% ပြန်လာ လုပ်. အများအပြားကပို
ဤသည်ပလက်တီနမ် VIP အကောင့်% 25 မှကြေး Accounts ကိုများအတွက် 100% အကြားနေကြပါတယ်။ ဆုကြေးငွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အများဆုံးပွဲစားများနှင့်အတူလိုပဲသင်အမြတ်အစွန်းဆုတ်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်မတိုင်မီတိကျတဲ့လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ငွေပမာဏအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကဆုကြေးငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိ 40 ကြိမ်ပါပဲ။
အခြားအွန်လိုင်း binary options များပွဲစားများဖို့ Finmax ဆုကြေးငွေအစီအစဉ်ခြားနားစေသောအရာတစ်ခုမှာအပိုဆုကြေးငွေသည်သင်၏သိုက်အတွက်သော့ခတ်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကသင်ဆုကြေးငွေလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေလျှင်ပင်သင်၏အအကျိုးအမြတ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဖမ်းသို့သော်သင်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲပေါင်းမဆိုအမြတ်အစွန်းဆုကြေးငွေနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရရှိခဲ့သည်။
ဒီအွန်လိုင်း options များအကျိုးဆောင် binary options များ, CFDs နှင့် FX ပေးထားပါတယ်။ စတော့ရှယ်ယာ, ကုန်စည်, ညွှန်းကိန်းများနှင့်ငွေကြေးအားလုံးပါဝင်သည်ကြောင်း 75 ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကျော်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါအစွန်းရောက်မတည်ငြိမ်သော cryptocurrency စျေးကွက်ကနေအကျိုးလိုသောကုန်သည်များအဘို့, Finmax Bitcoin binary options များပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအစားထက် cryptocurrency ရောင်းမဝယ်သည် binary options များသငျသညျက၎င်း၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ထင်ကြေးများနှင့်တစ်ဦး fixed ပြန်လာဝင်ငွေမှခွင့်ပြုပါ။
Bitcoin အပြင် Finmax လည်း Litecoin, Etherum နှင့်ဂယက်ထပေးထားပါတယ်။ သငျသညျ Crypto တစ်ဦးထက်ပိုသောကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးအပေါ်ကုန်သွယ်မှုရှာနေလျှင်, သင်တစ်ဦးထက်ပိုထူထောင်အွန်လိုင်းပွဲစားနှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
ဒီအွန်လိုင်း binary options များအကျိုးဆောင်နှစ်ခုကုန်သွယ်မှုမျိုးဂန္အမြင့် / အနိမျ့နှင့်အထက် / အောက်တွင်ပေးထားပါတယ်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးနှငျ့ ပတျသကျ. , သင် 30 စက္ကန့်သကဲ့သို့အနည်းငယ်သို့မဟုတ်6လအတွင်းသကဲ့သို့ရှည်လျားအတွက်ကုန်သွယ်မှုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ exit နိုင်ပါတယ်။ Expiry ဒီအကွာအဝေးနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ရက်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွင်းအမြတ်အစွန်းရစေခငျြတဲ့သူကုန်သည်များအဖြစ်မဟုတ်တော့အနေအထားကိုကိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုကုန်သည်များအဘို့ကု သ. မရသော။
Finmax အများအပြားအသိအမှတ်ပြုငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များလက်ခံခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဘဏ်ငွေလွှဲခရက်ဒစ်ကဒ်, Neteller, Webmoney, Skrill နှင့် ePayments ပါဝင်သည်။
သင်ကလက်ခံခဲ့သည်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များမဆိုရန်ရန်ပုံငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်ယူသင့်အကောင့်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့5ရက်ပေါင်းအထိကြာနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ငွေ, ရွှေနှင့်ပလက်တီနမ်အကောင့်များအတွက်, ထုတ်ယူ 48 နာရီသကဲ့သို့အနည်းငယ်သာအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်က, ဒီပွဲစားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိဘကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့် IFMRRC သတိပေးချက်များရှိနေကြသည်မဟုတ်။ binary options များကုန်သွယ်ဖိုရမ်များ, လူမှုရေးမီဒီယာအဖွဲ့များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကွဲပြားခြားနားသောမှတဆင့် scouring ပြီးနောက်ကျမတို့ကလည်းဘယ်ကုန်သည်တိုင်ကြားမှုများကိုဖြတ်ပြီးမလာခဲ့ပါဘူး။
တစ်လျောက်ပတ်သောရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းပေးတဘက်, Finmax အားလုံးကုန်သည်များကိုပိုမိုဝင်ငွေကူညီပေးနေဆီသို့ဦးတည်ပစ်မှတ်ထားထူးခြားသော features တွေပေးဖို့အပိုမိုင်သွားပြီ။ သူတို့ကကုန်သွယ်သတင်းများ, အဆင့်မြင့်ဇယား, လူမှုရေးကုန်သွယ်နှင့် analytics ပါဝင်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့အကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုရရှိနိုင်ကြသည်။
ဒီပွဲစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းကွဲပြားခြားနားသော features တွေ rated ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအင်္ဂါရပ် 20 စုစုပေါင်းရမှတ်ဆန့်ကျင် rated ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Finmax က်ဘ်ဆိုက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်အညွှန်းတွေနဲ့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကုန်သည်ကြီးများတစ်သရုပ်ပြသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်အကောင့်ကလွယ်ကူလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုက်ရဲ့ထိပ်မှာ platform ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကွဲပြားခြားနားသော features တွေရန်သင့်အား redirect လိမ့်မည်ဟုကွဲပြားခြားနားသော tabs များဖြစ်ကြသည်။
ကုန်သည်ဖော်ရွေလည်းထိုကဲ့သို့သောလွယ်ကူအသိပေးအရောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရသောဇယားများနှင့်နေ့စဉ်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော features တွေတွေ့ရတော့ပါဘူး။
သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ဆုကြေးငွေလာပြီနဲ့တူခဲ့လျှင်, Finmax သိုက်အပေါ်% ဆုကြေးငွေ 100 ရန်သင့်အားဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ သင့်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. သင်သည်လည်းအန္တရာယ်အခမဲ့အရောင်းအနေအကြိုးခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ယူမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြပြီးသင့်ဆုတ်ခွာ 24 နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ site ကိုလည်းအလွယ်တကူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 8 ကွဲပြားခြားနားသည့်နိုင်ငံတကာဘာသာစကားများထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဆိုက်နှင့်တွေ့ရှိရသည့်တစ်ခုတည်းသောအဓိကချို့ယွင်းချက်စည်းမျဉ်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အဆိုပါ IFMRRC စည်းမျဉ်းအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါကဲ့သို့အခြို့သောနိုငျငံမြားမှကုန်သည်များပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။
Finmax 75 ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများကိုကျော်ပေးထားပါတယ်။ ပိုပြီးထူထောင်ပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအတော်လေးကန့်သတ်သည်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကိုသူတို့အများဆုံးကုန်သည်များကဝယ်လိုအားနေသောအများအပြား cryptocurrencies ကမ်းလှမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောကျတယ်။
ဤသည်ပွဲစား 30 စက္ကန့်နှင့်6လအတွင်းအကြား၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးပေးထားပါတယ်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူသငျသညျသငျ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေ မူတည်. ပေးသောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာပေါ်တွင်သင်၏ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကိုထိန်းညှိဖို့စေသည်။
အများဆုံးအွန်လိုင်းပွဲစားများကဲ့သို့ပင် Finmax အရောင်းအပေါ်မှာကော်မရှင်အားသွင်းမထားဘူး။ အခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်. နှင့်တကွ, ပလက်ဖောင်းကြေး, ငွေနှင့်ရွှေအကောင့်တစ်ခုဆုတ်ခွာကြေးနုတ်ပါလိမ့်မယ်။
အောင်မြင်သောအရောင်းအပေါ်ထိရောက်တဲ့ပြန်လာ 70% နှင့် 80% အကြားနေကြပါတယ်။ ဤသည် 95% ထိရောက်ပြန်လာအထိပူဇော်တဲ့သူကအခြားပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်နိမ့်သည်။
Finmax ထိုကဲ့သို့သော CySEC နှင့် ASIC အဖြစ်အာဏာပိုင်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မထားပါကတည်းကသူတို့အကောင့်သစ်ကိုင်ဆောင်သူမှဆုကြေးငွေချီးမြှထံမှတားမြစ်ထားသောမဟုတ်ပါဘူး။ အကောင့်သစ်ဖွင့်လှစ်သင်% ဆုကြေးငွေ 100 မှတက်ရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သော်ရရှိခဲ့ပြီးဆုကြေးငွေပမာဏကိုပေါင်းအမြတ်အစွန်းရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်တော့မည်နိုင်ရန်အတွက်, သင်ဆုကြေးငွေပမာဏကို 40 အကြိမ်တစ်ဦးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အောင်မြင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရရှိရှေ့၌သင်တို့ရန်ပုံငွေများရုပ်သိမ်းပေးရန်ချင်သို့သော်လျှင်, သင်ရရှိခဲ့သည်အမြတ်အစွန်းပေါင်းဆုကြေးငွေလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်နိမ့်ဆုံး $5ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူမယ့်အချိန်ကသေးငယ်တဲ့ပမာဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်သင့်အကောင့်လက်ကျန်ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့စေသည်။
သူတို့ရဲ့ clients များဆီသို့ဦးတည်မိမိတို့၏ကတိကဝတ်မှစစ်မှန်သော, Finmax ကောင်းတစ်ဦးပြုတော်မူပြီ
ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်. အလုပ်။ သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအတော်များများဘာသာစကားများထောက်ခံပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ချက်တင်ကနေတဆင့်လက်လှမ်းမှီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသင်တို့ကိုလည်း၎င်းတို့၏ site ပေါ်တွင်သင်၏နံပါတ်ထားခဲ့ပါနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုပြန်သငျသညျကိုပဌနာတစ်ထောက်ခံမှုရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုကိုအင်္ဂါရပ်ကဆက်ပြောသည်ပါတယ်။
Finmax အများအပြားငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များလက်ခံခဲ့သည်။ သင်ရွေးချယ်နည်းလမ်းပေါ်မူတည်ပြီး, သင့်ငွေပမာဏကိုသင့်ရဲ့ကုန်သည်အကောင့်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ရက်ပေါင်းများစွာဖို့မိနစ်အနည်းငယ်အကြားဘာမှမယူသင့်ပါတယ်။ နိမ့်ဆုံးထည့်သွင်းငွေပမာဏကိုကျနော်တို့ကတခြားထူထောင်ပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မြင့်သောတွေ့ရှိခဲ့ရသော $ 250 ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ယူ 24 ရက်5နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ သင့်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. သင်တစ်ဦးဆုတ်ခွာကြေးတရားစွဲဆိုသို့မဟုတ်မလိမ့်မည်။
အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်အပြင်, သငျသညျ2နောက်ထပ်အကောင့်အကြားရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ဖိတ်ကြားချက်ကိုမှတဆင့်ရရှိနိုင်သည့်အပိုဆောင်းပလက်တီနမ် VIP အကောင့်ရှိပါတယ်။ ရှေးခယျြသောအကောင့်အမျိုးအစားကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသော features တွေမှ access ကိုပေးသည်။ အဆင့်မြင့်အကောင့် (ရွှေနှင့်ပလက်တီနမ်) သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်၌သင်တို့ကိုငွေသွင်းရန်လိုအပ်နေတဲ့အပိုငွေပမာဏကိုရကျိုးနပ်သောပိုကောင်း features နဲ့အချို့သောအခွင့်ထူးပေး။
က 2015 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ကတည်းက Finmax ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အွန်လိုင်း binary options များအကျိုးဆောင်သို့လာခဲ့သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကုန်သည်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားပစ်မှတ်ထား4ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုဖန်တီးကောင်းသောအလုပ်အမှုကိုပြုပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းကောင်းကောင်းဒီဇိုင်းနှင့် desktop နဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကနေတဆင့်အလွယ်တကူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဝေးနေတဲ့ကောင်းသောအရာတစုံတခုသောပွဲစားနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သူမျှမတိုင်ကြားမှုများရှိပါတယ်။ သို့သော်သူတို့သည်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ကန့်သတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြေရာယဇ်နှင့် ပတ်သက်. အချို့သောတိုးတက်မှုများအသုံးပြုနိုင်တယ်။ သငျသညျ Finmax နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်လျှင်ယေဘုယျအား, သူတို့အထဲကကြိုးစားနေရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။
Tags: finmax, finmax binary options များ, finmax binary options များပြန်လည်သုံးသပ်, finmax ဆုကြေးငွေ, finmax ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်, finmax ကုန်သည်, finmax ကုန်သွယ်, finmax ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, finmax ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, finmax စိစစ်အတည်ပြု, finmax ဆုတ်ခွာ
Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအနိုင်ယူရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြံပေးချက်များ -
cryptocurrencies လုံခြုံစိတ်ချစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ထိပ်တန်း3အကြံပေးချက်များ
Cryptocurrency Volatility နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အလုံခြုံဆုံးဒင်္ဂါးများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
Gold Bullion Vaulting Services သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။